မဒေါင်းလုပ် Antivirus မဆော့ဝဲ မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် Antivirus မဆော့ဝဲ
ESET NOD32 Antivirus 2021 သည်ဟက်ကာများ၊ ransomware နှင့် phishing မှကာကွယ်ရန်အဆင့်မြင့် antivirus program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်၊ worms, spyware, ransomware အပါအဝင် malware အမျိုးအစားအားလုံးမှကာကွယ်ရန်အစဉ်အမြဲ antivirus ပရိုဂရမ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ၎င်းသည်စနစ်ကိုနှေးကွေးစေခြင်း၊ system update များကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊...
Avira Free Antivirus သည်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာကိုဗိုင်းရပ်စ်၊ ထရိုဂျန်၊ သူခိုးများ၊ ပိုးကောင်များ၊ malware နှင့်အခြားအရာများအားကာကွယ်လိုသောအစွမ်းထက်သောအခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသူများအားစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော interface နှင့်အဆက်မပြတ်မွမ်းမံထားသော antivirus ဒေတာဘေ့စ်ကိုပေးသည်၊...
Emsisoft Internet Security Pack သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုဗိုင်းရပ်စ်များမှကာကွယ်ရန်နှင့်သင်၏အင်တာနက်လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သောဘက်စုံသုံးကာကွယ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ firewall နှင့် antivirus အင်္ဂါရပ်များပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ပရိုဂရမ်သည်အင်တာနက်နှင့် malware မှတဆင့်အဝင်နှင့်အထွက်ဆက်သွယ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုစစ်ဆေးသည်။ Emsisoft Internet Security...
Avira Antivirus Pro မှသင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ဒေတာများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစကင်ဖတ်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အင်တာနက်မှ system ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြင့်သင်၏အရသာကိုပျက်စီးစေသောအန္တရာယ်များအားလုံးကိုအတတ်ပညာဖြင့်ကာကွယ်ပေးသည်။ Avira Antivirus Pro...
Avast Ultimate သည် ၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်လုံခြုံမှု၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်စုံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပရီမီယံလုပ်ငန်းသုံးခုကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အများဆုံးအကာအကွယ်ပေးသည့် Avast Premier၊ Avast Cleanup Premium၊ disk သန့်ရှင်းရေးနှင့်အရှိန်မြှင့်ကိရိယာ၊ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုစာဝှက်ပေးသော Avast SecureLine...
Emsisoft အရေးပေါ်ပစ္စည်းသည်သင်မည်သည့်အချိန်မဆိုသယ်ဆောင်နိုင်သောလုံးဝအခမဲ့လုံခြုံရေးအထုပ်ဖြစ်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာတွင်ပြဿနာတစ်ခုရှိနေလျှင် (သို့) သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကသင့်ကွန်ပျူတာကိုကူးစက်စေသောအန္တရာယ်ရှိသောဆော့ဝဲများကိုအကူအညီတောင်းသောအခါ Emsisoft Emergency Kit ကိုသင်နှင့် ယူ၍ သင်၏အကူအညီကိုအလျင်အမြန်ယူနိုင်သည်။ ...
Junkware Removal Tool သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကို malware, Adware, toolbars များနှင့်အခြားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော software များကိုရှာဖွေရန်အသုံးဝင်သောယုံကြည်စိတ်ချရသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ malware ဖယ်ရှားရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်၊ သင်၏ browser ၌ကပ်ငြိနေသော software ကိုဖယ်ရှားနိုင်သော program သည်ဤအင်္ဂါရပ်ပါ ၀...
Zemana AntiMalware သည်ကွန်ပျူတာကိုခြောက်မိနစ်အတွင်း scan ဖတ်ပြီး malware ကိုဖယ်ရှားသည်။ install မလုပ်ဘဲအလုပ်လုပ်သော program သည် rootkits, trojans, bot, virus, worms, spyware နှင့် adware ကဲ့သို့သော software အားလုံးကိုထောက်လှမ်းသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်ငါးခု၏အင်ဂျင်ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းသည် Zemana AntiMalware...
Comodo Hijack Cleaner သည်ကူးစက်ခံရသောကြော်ငြာများသို့မဟုတ်အင်တာနက်ဘရောင်ဇာများမှဖွင့်လှစ်သောအခြားအကြောင်းအရာများမှသင်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲသည်သင်၏ system ကိုလုံခြုံစွာထားခြင်းဖြင့်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဂူဂဲလ်ခရုမ်း၊ Mozilla Firefox၊ Internet Explorer၊ Comodo Dragon နှင့် Comodo Ice...
Tencent PC Manager သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောလုံခြုံရေးကိရိယာကိုပေးသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူတပ်ဆင်ခြင်းလွယ်ကူသောအခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ဗိုင်းရပ်စ်များဝင်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးလိုပါကသင်အသုံးပြုနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Trojan များ၊...
TrojanHunter ဆိုသည်မှာဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်ကွန်ပျူတာများကို malware အတွက် scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ TrojanHunter ဟာရိုးရှင်းပြီးနားလည်လွယ်တဲ့ interface တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ဤပရိုဂရမ်ကိုဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အကြံမပေးနိူင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့...
McAfee AVERT Stinger သည်တိကျသောဗိုင်းရပ်စ်အချို့ကိုဖျက်ရန်သုံးသောဗိုင်းရပ်စ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပရိုဂရမ်ဟာဗိုင်းရပ်စ်အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ညီမျှတာမဟုတ်ဘဲအဖြည့်ခံတစ်ခုပါ။ Stinger သည်တိုးတက်လာသော scanning နည်းပညာအသစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤပရိုဂရမ်ဗားရှင်းသည် W32/Polip...
Panda Cloud Cleaner သည်ခေတ်မီ cloud နည်းပညာကြောင့်သင့်ကွန်ပျူတာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲများကိုအွန်လိုင်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်လွယ်ကူသောအသုံးပြုရန် antivirus program တစ်ခုဖြစ်သည်။ Panda Cloud Cleaner ကို အသုံးပြု၍...
IObit Malware Fighter Free ပရိုဂရမ်သည်သူတို့၏ကွန်ပျူတာအား malware ခြိမ်းခြောက်မှုများမှကာကွယ်လိုသောသုံးစွဲသူများတွင်ရှိနိုင်သည့်အခမဲ့ရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည်၎င်း၏အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သော application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုငါပြောနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင် malware application...
EMCO Malware Destroyer သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသော malware များကိုဖယ်ရှားရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်၏အရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်က၎င်းသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်သင့် system...
Comodo Cloud Antivirus ကိုသုံးစွဲသူများအားဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်မှုပေးသည့်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ကွယ်မှ cloud computing ၏စွမ်းအားကိုရယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကွန်ပြူတာများတွင်လုံးဝအခမဲ့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ သုံးနိုင်သည့်ဤဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ (ဖ်)...
Comodo AntiVirus သည်သင့်ကွန်ပျူတာကိုဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှအစဉ်ကာကွယ်ပေးပြီးလိုအပ်လျှင်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရုံသာမက Comodo AntiVirus သည်၎င်း၏ထူးခြားသောနည်းပညာဖြင့် malware နှင့် applications များကိုထိန်းချုပ်သည်။ Comodo AntiVirus ပရိုဂရမ်သည်အဆင့်တိုင်းမှအသုံးပြုသူများနှစ်သက်သောပရိုဂရမ်သည် ၀...
Panda အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏လုံခြုံရေး application များအတွက်ကျော်ကြားသော Panda ကုမ္ပဏီမှပြင်ဆင်သည်။ အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ယခင်က Panda Cloud Antivirus အဖြစ်တည်ရှိခဲ့သောပရိုဂရမ်သည်ယခုအခါ Panda Free Antivirus...
PCKeeper Antivirus သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုပြင်ပမှအန္တရာယ်ရှိသောဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် Trojans များမှကာကွယ်ရန်သင်သုံးနိုင်သောယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အထင်ကြီးနိုင်သော antivirus program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပေါ့ပါးမှုကြောင့် program ၏အခမဲ့အစမ်းဗားရှင်းကိုသင်သုံးနိုင်သည်၊...
Panda Global Protection သည်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုအမျိုးမျိုးမှကာကွယ်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောလုံခြုံရေးဆော့ဝဲဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်၊ spyware၊ rootkits၊ hackers၊ အွန်လိုင်းအန္တရာယ်များ၊ အထောက်အထားသူခိုးများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ် အရင်းအမြစ်များကို၎င်း၏ spam ဆန့်ကျင်သောအင်ဂျင်ဖြင့်အီးမေးလ်ကိုပံ့ပိုးပေးသည်။...
Kaspersky Security Scan သည်သင်၏ Windows အခြေပြုကွန်ပျူတာကိုအလျင်အမြန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးသော application တစ်ခုဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်သင်၏ system တွင်အခြေချထားသောအခြားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများအကြောင်းနှင့်သင့်ကိုကျန်းမာသောစနစ်ပြန်လည်ရရှိစေရန်ကူညီပေးသည်။ Kaspersky Security Scan သည်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင် install လုပ်ထားသော Kaspersky...
Kaspersky ၏အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာဖြစ်သော Kaspersky Virus Removal Tool သည်သင်၏ကွန်ပျူတာမှဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Kaspersky Anti-Virus တွင်အသုံးပြုသောထိရောက်သော scanning နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပြင်ဆင်ထားသော program သည်သင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့စိမ့်ဝင်နေသော malicious software...
Panda Antivirus Pro သည်ကွန်ပျူတာကိုလူသိများပြီးမသိသောအန္တရာယ်ရှိသော software အမျိုးအစားအားလုံးမှကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်တိုးတက်လာသော 2016 ဗားရှင်းဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ spyware များ၊ rootkits နှင့်အထောက်အထားမသမာမှုများကဲ့သို့သောအန္တရာယ်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ Panda ၏ဆုရ Collective Intelligence နည်းပညာဖြင့်သန်းပေါင်းများစွာ Panda Security...
ClamAV သည်ဗိုင်းရပ်စ်ပေါင်း ၇၅၀, ဝဝဝကျော်ကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်သောအခမဲ့ open source လုံခြုံရေး tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ MS-DOS-based feature ပါ ၀ င်သော program သည်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုလျင်မြန်စွာလျင်မြန်စွာစကင်ဖတ်နိုင်သည်။ ခေတ်မီအောင်နေနိုင်သော ClamAV သည် ZIP နှင့် RAR ကဲ့သို့ချုံ့ထားသောဖိုင်များကိုစကင်ဖတ်နိုင်သည်။ system file သည် malicious software...
UsbFix သည်သင်၏ USB ချောင်းများနှင့်အခြားသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော flash drive နှစ်ခုစလုံးတွင်အန္တရာယ်ရှိသောဖိုင်များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များအားလုံးကိုရှာဖွေဖျက်ပစ်နိုင်သောအသုံးဝင်ပြီးအခမဲ့ program တစ်ခုဖြစ်သည်။...
Avira Rescue System သည်သင်၏ Windows operating system boot မတက်လျှင်သင်၏အကူအညီကိုကူညီပေးမည့်အခမဲ့ system recovery software တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့သော malicious software များတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကြောင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးခြင်းဖြင့် Windows ကိုဖွင့ ်၍ မရတော့ပါ။ ဒီ့အပြင်၊ အသစ် install လုပ်ထားသည့် software...
Dr. Web Antivirus သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အန္တရာယ်ရှိသော software များမှကာကွယ်လိုလျှင်သင်ရွေးချယ်နိုင်သော antivirus program တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာကိုပြည်တွင်းနှင့်အွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများမှကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်တစ်ခု Dr. Web Antivirus...
NANO AntiVirus သည်သင့်အားလက်ရှိဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်များမှကာကွယ်ပေးသောအစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်သင်၏ system ကိုမပင်ပန်းစေသော program သည်ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်များကိုလည်းဗိုင်းရပ်စ်များရှာဖွေပေးနိုင်သည်။ အစီအစဉ်၏အရေးအပါဆုံးအင်္ဂါရပ်သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။...
Baidu Antivirus သည် cloud computing နည်းပညာ၏ကောင်းချီးများကိုသုံးသောအောင်မြင်သော antivirus software တစ်ခုဖြစ်သည်။ cloud computing ကျေးဇူးကြောင့်ပရိုဂရမ်သည်အင်တာနက်မှ ၀ င်ရောက်သော virus cookies များနှင့်အသစ်ဖန်တီးထားသောဗိုင်းရပ်စ်များကိုအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ဒီ program ကမင်းကိုမတူညီတဲ့ virus scanning modules...
Trojan Killer သည်အန္တရာယ်ရှိသောကွန်ပျူတာဆော့ဝဲများကိုသန့်ရှင်းရန်သင်သုံးနိုင်သောလုံခြုံရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Trojan, spyware, adware, dialer, malware စသဖြင့်များစွာသော malware အမျိုးအစားများကိုသန့်ရှင်းရန်သင်၏အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးပရိုဂရမ်ဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာမှ Trojan များကိုလျင်မြန်ထိရောက်စွာဖျက်ပစ်နိုင်သည်။...
Avetix Free Antivirus သည်သုံးစွဲသူများ၏ system များကို malicious software များမှကာကွယ်ရန်တီထွင်ထားသောပြည့်စုံသော antivirus program တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အခမဲ့ download ရယူနိုင်သောဤပရိုဂရမ်ကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကိုအန္တရာယ်ရှိသောဆော့ဝဲများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များမှကာကွယ်လိုသူမည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီ program မှာအသုံးဝင်တဲ့...
Dr.Web LiveDisk သည်ဗိုင်းရပ်စ်များကြောင့်သင်၏ကွန်ပျူတာအသုံးမ ၀ င်သောအခါသင်၏ဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်ကူညီပေးမည့်ကွန်ပျူတာပြန်လည်ရှာဖွေရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Dr.Web LiveDisk သည်သင်၏ကွန်ပျူတာများကိုအခမဲ့ download လုပ်ပြီးသုံးနိုင်သော system recovery tool တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြေခံအားဖြင့်သင်၏ Windows operating system...
ESET Dorkbot Cleaner သည်ကွန်ပျူတာ ၁ သန်းကျော်သို့ပြန့်နှံ့သွားသော Dorkbot botnet ကိုရှင်းလင်းရန် Eset မှတီထွင်ထားသည့်ရိုးရှင်းပြီးအခမဲ့ antivirus program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်ယက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများကိုဖြုတ်နိုင်သောအမှတ်တရများမှ ၀ င်နိုင်သော Dorkbot သည်ပထမ ဦး စွာ Facebook နှင့် Twitter...
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများတွင် install လုပ်သော antivirus နှင့်လုံခြုံရေးပရိုဂရမ်များသည်ရံဖန်ရံခါတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနိုင်သည်မှာသိသာထင်ရှားသည်။ ဤပဋိပက္ခများသည်ကံမကောင်းစွာဘဲပြဿနာများကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးဒေတာဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။...